Tababare Ronald Koeman Oo Shaaciyey Xidhiidhkii Barcelona La Samaysay Ka Hor Intii Aanay Shaqada Ka Caydhinin Ernesto Valverde Iyo Sababtii Uu U Diiday – Cadalol.net
Tababare Ronald Koeman Oo Shaaciyey Xidhiidhkii Barcelona La Samaysay Ka Hor Intii Aanay Shaqada Ka Caydhinin Ernesto Valverde Iyo Sababtii Uu U Diiday
Tababaraha xulka qaranak Netherlands, Ronald Koeman ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey warar suuqa ku jiray oo sheegayay in Barcelona ay isku dayday inay tababaraheeda u magacowdo xilligii ay shaqada ka caydhinaysay macallinkii hore ee Ernesto Valverde.
Koeman oo waqtigii uu ciyaartoyga ahaa u dheeli jiray Barcelona, waxa uu ka mid ahaa tiro tababareyaal ah oo ay Barcelona xidhiidh la samaysay ka hor intii aanay Quique Setien u dhiibin shaqada laga eryey Valverde, laakiin macallinka reer Netherlands ayaa iska diiday inuu aqbalo dalabkii ay Barca u dirtay.
“Waxaan ku idhi maya Barcelona, sababtoo ah waxaan la joogaa xulka qaranka Holland. Mana ahayn waqtigii ku habboonaa ee aan tegi lahaa.” Ayuu yidhi Ronald Koeman.
Tababare Koeman waxa kale oo uu ka hadlay bandhigga laacibka khadka dhexe ee Frenkie de Jong oo dhaliilo loo jeedinayo, waxaanu yidhi: “Waxa wanaagsan waa inuu kulamo badan ciyaaray, waxaanu ka dheelay boosas kala duwan oo aanu uga ciyaarin Ajax iyo xulka qaranka midna, waxaanu ahaa go’aan tababarihiisu gaadhay.”